5-ta Arrimood Ee Ugu Waaweyn Ee Caqabadda Ku Noqda Ka Midho Dhalinta Fikirka Iyo Hal-Abuurka Qofka - Daryeel Magazine
5-ta Arrimood Ee Ugu Waaweyn Ee Caqabadda Ku Noqda Ka Midho Dhalinta Fikirka Iyo Hal-Abuurka Qofka
Inta badan dadka doonaya in ay bilaabaan ganacsi ama shaqo kale oo cusubi waxa ay la kulmaan dhibaatooyin fara badan oo qaar badan ku qasba in ay qorshahooda ficil u rogi kari waayaan, ama shaqadooduba saqiirto inta aanay bilaaban ba. Dr. Xasan A-Sacadi oo kormeere guud ka ah xarunta hal-abuura iyo hoggaaminta ganacsiga oo ka tirsan jaamacadda Malik Cabdalcasiis ee magaalada Jiddah dalka Sucuudiga ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah mashaariicda fashilma ama turun-turrooyinka la kulmaa inta aanay bilaaban ay yihin kuwa ay ka hor yimaaddaan dhibaatooyin ay ugu mudan yihiin kuwan hoos ku qorani.
1. Aragi la’aan: Dr. Sacdi waxa sheegay in qodobkani uu yahay caqabadda in badan ka hor-timaadda qof kasta oo mashruuc qorshayanaya. Dad badan oo maalgashadayaal ah ama shaqooyin kale curiyey rag iyo dumarba ayaa aan lahayn hiigsi waqtiga fog ah iyo qorshayaal waqti ku xaddidan iyo nidaam ay u dhigeen hab-sami u socodsiinta mashaariicdooda. Qaar badan oo ka mid ah ayaanay ku keentaa in ay hawsha ay dib uga gurtaan iyaga oo badhtamaha u galay, waao waxa ay xal u waayayaan mushkiladaha aanay marka hore ku xisaabtamin ee ka hor imanaya.
2. Waxba ha ka baqan in fikirka lagaa xado: Sababta labaad ee uu digtoorku sheegay in ay caqabad ku noqoto dadka xilligab ilowga mashruuc ama ganacs waa; dadka oo inta badan hawlahooda bilaaba iyaga oo waabasho ku jirto ama aad isaga ilaalinaya in ay fikirkooda sheegaan oo dadka kale la wadaagaan, sababtuna waa cabsi ay ka qabaan in fikirkaas laga xado. Cabsida ay ka qabaan in fikirka cid kale ka xaddo ayaa caqabad ku noqota suuqgeyntii fikirku u baahnaa iyo u bandhigista dadka maalgelin lahaa, waxa aanay taasi keeni kartaa in fikirkaas quruxda badani qofka ku dhex dhinto.l
3. Maalgelin: Maalgelinta mashruucu waa arrinta ugu dhibta badan ee ka hortimaadda qofka hal-abuuray fikir ganacsi, dhibtuna waxa ay ka taagan tahay dadka inta badan hal-abuurka la yimaadda oo ah dad aan iyagu lacagtii haynin ama aan gaadhin heer lacagta fulinta mashruucaa ku filan deyn ahaan lagu aamini karo.
4. Suuq-geynta: Dr. Sacdi waxa uu sheegay in haddii qofka fikirka hayaa waa in uu ku xisaabtamo muhiimadda ay leedahay suuqgeynta fikraddu, sidaa awgeed uu waqti iyo maskaxba geliyo sidii uu fikirkiisani inta uu bilowga yahayba dadka uga dhaadhicin lahaa, haddii kale waxaa khatar ku jira mustaqbalka mashruuciisa.
5. U ban bixid: Sida uu Digtoorku sheegay waxaa in badan dhacda in qofku uu fikirka ficil u beddelo balse aanu hawsha maamulista iyo ka midho dhalinta mashruuca isagu qaban ee uu cid kale u xil saarto, taasina waxa ay ka mid tahay sababaha ugu badan ee mashruuca fashilaadda ku keenaya. Talada ugu fiicani waa in qofku uu u ban-baxo shaqada uu isagu curiyey, waayo ma jirto cid kale oo sida uu u dareemayo ama u fahamsan yahay fikirkiisa ula fahamsani, mashruuc kastana fulintiisa iyuo hirgelintiisa hore waxa ay ku fiican yihiin in qofkuu hal-abuuray uu maamulo.
Caadooyin Qofka Ku Reeba Daal Iyo Tabar-Darro Sababna U Noqda Inuu Si Wanaagsan U Shaqayn Waayo Maalintii